महानगर प्रमुख दाहालको आक्रोश- ‘सिटी हलको विषयमा जनतालाई किन उचालियो ?’ – Everest Dainik – News from Nepal
महानगर प्रमुख दाहालको आक्रोश- ‘सिटी हलको विषयमा जनतालाई किन उचालियो ?’
भरतपुर, असोज २७ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हलका नाममा महानगरका जनतालाई उचाल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएकी छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनले शुक्रबार आयोजना गरेको दसैं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिसमेत रहेकी दाहालले सिटी हलको विषयमा जनता उचाल्ने काम भइरहेको हुनाले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिन् ।
‘सिटी हलको विषयमा कहिले जगतपुरका जनतालाई उचालिएको छ, कहिले पटिहानीका जनतालाई उचालिएको छ, कहिले कहाँको जनतालाई उचालिएको छ, यो के हो ? किन उचालिएको छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सिटी हल जहाँ बनाउन खोज्दा पनि विरोध भइरहेको छ, महानगरवासी भन्नूस् अब म के गर्न सक्छु ? जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु ?’
क्यान्सर अस्पतालभन्दा पर जान सकिँदैन
कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले सिटी हल क्यान्सर अस्पतालभन्दा परको दूरीमा बनाउन नसकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो इच्छा त म जन्मेको ठाउँ शिवनगरमा बनाउन मन थियो, महानगरको मध्ये भागमा पनि पर्ने थियो, तर त्यहाँ हुन सक्दैन । क्यान्सर अस्पतालभन्दा पर गएर सिटी हल बनाउन सकिदैन ।’ दाहालका अनुसार सिटी हल सिटीकै पेरिफेरिमा हुनुपर्छ ।
भरतपुर महानगरले सुरुमा क्यान्सर अस्पतालको ५ बिघा जग्गामा सिटी हल बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘भरतपुरमा बन्न लागेको सिटी हल क्यान्सर अस्पतालको जग्गामा निर्माण गर्ने भनी गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय हुँदै फाइल क्याबिनेटसम्म पुगेको थियो’ महानगर प्रमुख दाहालले स्मरण गर्दै भनिन्, ‘प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाट विरोध भएपछि विकल्प खोजौ नत्र गेष्ट हाउस चौरमा बनाउने निर्णय गरेका थियौँ । त्यहाँ पनि साना दलहरुले बिरोध गर्नुभयो ।’ सिटी हलको विषय अहिले अन्योल बनिरहेको उनको भनाइ थियो ।
५० लाख बजेट फ्रिज हुन्छ
महानगर प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरमा सिटी हल बनाउन नसके बजेट फ्रिज भएर जाने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सिटी हलको लागि आएको ५० लाखको बजेट फ्रिज हुनबाट मैले रोकिरहेको छु, सधैँभर त यो बजेट त रोकिदैन ।’ सिटी हल बनाउनै नदिने हो भने बजेट फ्रिज भएर जाने उनको भनाइ थियो ।
‘सिटी हल जहाँ बनाउन खोज्दा पनि विरोध हुने, बनाउनै नदिने नियत हो भने त बजेट फ्रिज भएर अर्को जिल्ला जान्छ, त्यतिबेला कसको दोष हुन्छ ? दाहालको आक्रोश थियो, ‘सिटी हलको चर्चा भएको छ महिना भयो, ६ महिनासम्म कुहिराका काग भइएको छ । यहाँको खिचातानीले भरतपुर महानगरमा आएको योजना उम्केर अन्त नजाओस् ।’
रिंगरोड ३० मिटरभन्दा कम हुँदैन
प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरले बनाउँदै गरेको रिंगरोड ३० मिटरको भन्दा कम नहुने बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘लिंकरोड त २४ मिटरको बन्न लागेको छ भने रिंगरोड ३० मिटरको भन्दा कम हुँदैन ।’ उहाँले भविष्यलाई हेरेर लिंकरोड र रिंगरोड बन्न लागेको बताउनुभयो । महानगरको रिंगरोड ९५ किलोमिटर लामो छ ।
‘रिंगरोड र लिंकरोडको काम भइरहेको छ, थोरै गर्ने हो तर राम्रो गर्ने हो । ढिलो होस् तर राम्रो होस्’ दाहालले भनिन्, ‘रिंगरोड बजारको मुख्य भागलाई छोडेर छेउछेउबाट लान पनि सकिन्छ ।’ भरतपुर महानगरको रिंगरोडमा १२ वटा लिंकरोड जोडिन्छन् ।
ट्याग्स: bharatpur mahanagarpalika, chitwan, Raneu dahal